तीज र प्रशासनको निगरानी – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
तीज र प्रशासनको निगरानी
२०७१ श्रावण २०, मंगलवार ०२:०४ गते
नेपालमा हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेहरुले मनाउने मुख्य तीन पर्वहरु छन्– तीज, दसैँ र तिहार । यी तीन पर्वहरु धुमधामका साथ मनाउँदै आइएको छ । तीज विशेष गरेर महिलाहरुले मनाउने पर्व हो । दसैँ र तिहार सबैका पर्व हुन् । तीन पर्वमध्ये तीजमा महिलाहरु महादेव र सप्तऋषिहरुको आराधना गर्छन्, उपवास बस्छन् । दसैँ देवी दुर्गाका नौ अवतारको पूजा हुने पर्व हो । तिहारमा लक्ष्मीको उपासना हुन्छ । यसरी तीन पर्वमध्ये दुई पर्व नारी शक्तिकै आराधना हुन्छ भने एक पर्वमा नारीहरु नै सहभागी हुन्छन् । धर्मसँग जोडिएका प्राचीन पर्वहरुमा पनि एक हिसाबले महिलालाई नै प्रधानता दिएको यसबाट देखिन्छ ।
त्यसो त, पर्वहरु अहिले विशुद्ध धार्मिक धारणा र परम्परागत चलनहरुमा मात्रै सीमित भएर मनाउन छाडिएको छ । धेरै चलनहरु परिष्कृत भएका छन् । आधुनिक बनाउने बहानामा केही विकृतिहरु पनि मौलाएका छन् । समयक्रम र बजारको विकासबाट पनि हाम्रा पर्वहरु प्रभावित भएका छन् । अब तीजकै कुरा गरौँ– महिलाहरु राम्रा लुगा लगाउने, माइत जाने, एक दिन मीठो र दह्रो दर खाने, अर्को दिन व्रत बस्ने र अन्तिम दिन सप्तऋषिहरुको पूजा गर्ने पुरानो चलन हो ।
समयक्रमले महिलाहरुलाई राम्रो लगाउन भदौ नै कुर्नु नपर्ने बनाएको छ । माइती कहिलेकाहीँ जान पाउने ठाउँ पनि हुन छाड्यो । व्रत र पूजाको त आलोचना गर्नेहरु प्रशस्त भए । अब आएर तीज कस्तो हुन थाल्यो भन्दा जुन धार्मिक मान्यता हो, त्योभन्दा पूरै अलग तर बजारको रंग लपक्कै पोतिएको । त्यसैले, तीज गीतको एल्बम निकालेर कलाकारहरु हिट हुने पर्व बन्दै छ । यही हिटको तहको आधारमा कलाकारहरुको मूल्य तय हुन्छ अनि त्यो कलाकारलाई बोलाउँदै हामी स्टेज तताएर तीज मनाउन थाल्ने भयौँ ।
दरमा त झनै हाबी भयो बजार । बजारमा जे–जति पार्टी प्यालेसहरु खुले र होटलहरु बने, त्यहाँ आयोजना हुन थाले दर खाने कार्यक्रम । एक दिने दर एक महिने कार्यक्रममा रुपान्तरित भयो । दरसँगै स्टेज प्रोग्राम पनि । एउटा ठूलै साङ्गीतिक कार्यक्रम झैँ बन्न थाल्यो तीजको पर्व, जहाँ पैसा प्रमुख बन्यो । होटलका उम्दा परिकार, अलिकति तीजका भाका र बाँकी हिन्दी र अंग्रेजी गीतको झंकार । तीजको उत्तरआधुनिक संस्करणको चरित्र यही हो । अनि, यी उत्सवहरुमा दामी पोशाक, ओजनदार गहना अनिवार्य हुन थाल्यो । संस्कृति अहिले आएर सम्पत्तिको होड गर्न पाउने अवसरमा रुपान्तरण भयो ।
एक महिने तीजको बिगबिगी भएपछि गत वर्ष चितवन प्रशासनले कदम चालेर यस्ता भड्किला आयोजनाहरुप्रति रोक लगायो । यो वर्ष पनि प्रशासनले विज्ञप्ति निकालेर चेतावनी दिइसकेको छ । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्मा तीजमा चितवनमा नहुने सूचनाले कोही–कोही हौसिएका पनि छन् । तर, यो अभियानमा प्रशासन कार्यालय अब चुप लागेर बस्न सक्ने परिस्थिति छैन । जिल्ला प्रशासनमात्रै नभएर अन्य सरकारी कार्यालय पनि यो अभियानमा जोडिएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्मा नहुँदैमा अभियान कमजोर हुने सम्भावना छैन ।
महिलाले मनाउने तीजका धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षको चर्को आलोचना भएकै हो । जस्तै, पतिका लागि भनेर पानी पनि नखाई किन दिनभर व्रत बस्ने ? अनि रजस्वला भएका बेला कसैलाई छोएमा पाप लाग्छ भन्ने आधारहीन कुरालाई विश्वास गरेर त्यो पाप कटाउन भन्दै ऋषिपञ्चमीमा किन पूजा गर्ने ? भन्नेजस्ता तर्क अगाडि आएकै हुन् । यस्ता चलनहरु परिष्कृत हुनुपर्छ भन्ने आवाज नाजायज थिएन, आवश्यक नै थियो । तर, यति कुराको विरोध गर्दागर्दै पनि तीजसँग जोडिएका अन्य पक्ष जस्तो गीत गाउने, नाच्ने, गहना र कपडा लगाउने, दर खाने, माइत जाने वा भेला हुने कुरामा कसैले विमति जाहेर गरेन । यी पक्षहरु धार्मिकभन्दा पनि सामाजिक बढी थिए ।
तीजको धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षमा बढी प्रहार हुँदा यसले बोकेको सामाजिक मान्यताहरुलाई पनि व्यवस्थित पार्ने चासो र चिन्ता हुन पर्दथ्यो । त्यसो नहुँदा सामाजिक पक्षमा पनि नराम्रोसँग विकृति हाबी भयो । नाच्ने, गाउने र खाने कार्यक्रमका दिनमात्रै लम्बिएन, खर्चको आकार पनि मोटो भयो । यसो हेर्दा तीज सांस्कृतिक पर्वभन्दा व्यापारिक कार्यक्रम बन्यो । बेलाबेलामा आयोजना हुने खाना र सांगीतिक कार्यक्रमजस्तो ।
अब यस्तो आयोजनाका बारेमा बेलैमा बहस गर्न कसैले आवश्यक नै ठानेन । बरू, गत वर्ष चितवन प्रशासन जागेपछि केहीले भित्रभित्रै आलोचना पनि गरे । धेरैले मौन नै बसेर प्रशासनको कदमलाई समर्थन गरे । तर, नागरिकस्तरमा प्रशासनको कदमलाई जुन तहले समर्थन गर्नुपर्ने हो, त्यो तहको तत्परता भने अझै देखा परेको छैन । सांस्कृतिक पर्वहरुलाई व्यवसायको माध्यम बनाउनेहरु यस कारण पनि अलि हौसिएका छन् ।
पर्वका आधारमा व्यवसाय बढाउने सोच गलत होइन । तर, व्यवसाय बढाउने नाममा पर्वलाई भड्किलो बनाउन हुँदैन । तीजका समयमा व्यापार बढाउने योजना पछिल्ला वर्षहरुमा निकै नै भड्किलो र अझ उत्ताउलोसमेत भएको थियो । यस्तो तडकभडक र उत्ताउलोपन निमिट्यान्न पार्नैपर्छ । तर, प्रशासनको सक्रियताले मात्रै दीर्घकालीन समाधान आउँदैन । यसमा तात्नुपर्ने भनेको नागरिक समाजले नै हो । तर खै किन हो, नागरिक समाज मौन समर्थनको अवस्थाभन्दा माथि आउन सकेन ।
नान्तीराज र शान्तिराज : सानो मान्छेको ठूलो काम
पत्रकारले रोजेको राजनीतिक बाटो